မင်းသားကြီး ကျော်ရဲအောင်နဲ့ ပိုးဝတီစံရဲ့ အကြောင်း ပေါ်ထွက်လာ – May Sharing
မင်းသားကြီး ကျော်ရဲအောင်နဲ့ ပိုးဝတီစံရဲ့ အကြောင်း ပေါ်ထွက်လာ
August 9, 2020 August 9, 2020 Bain Taw
ဘယ်သူမှ မသိသေးတဲ့ မင်းသားကြီး ကျော်ရဲအောင်နဲ့ ပိုးဝတီစံရဲ့ အကြောင်း ပေါ်ထွက်လာပြီ
ဟန်ငြိမ်းဦးကတော့ မင်းသမီးလေး ပိုးဝတီစံနဲ့ မင်းသားကြီးကျော်ရဲအောင်တို့ ဇာက်လမ်းတွေ ဖွင့်ချ ထားပြီးနောက် ပိုးဝတီစံ ရဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေကို ယခုလို ပြန်လည် ချေပထားပါတယ်နော်။ “ဟုတ်တာပေါ့ ဟန်ငြိမ်းဦးဆိုတဲ့ကောင်လေးက အနီထောက်ခံသူတွေကိုပဲတင်တာ.ဖိုးလပြည့်၊အေးနေဝင်း၊အေးမြတ်သူ၊ မိုးစက်ဝိုင်၊မိုးယံဇွန်တို့ NLDဘက်တော်သားတွေ ဘယ်တုန်းကဖြစ်သွားတာလည်းဟင် ရှင်းပြအုံး ”
နောက်တခုကျော်ရဲအောင် သူ့အမျိုးသမီးနဲ့2003မှာ ကွဲသွားတယ်ဆိုပီး အမဝန်ခံတယ်နော်။ ဘာလို့ကွဲသွားလည်းဆိုတာ အမသိလား သိအောင်ရောကြိုးစားဘူးလား တလမှာ ၂၅ရက်လောက်က ဟိုတယ်မှာဆော်နဲ့နေပီး ငါးရက်လောက်အိမ်ပြန်အိပ်တဲ့ ယောကျာ်းတယောက်ကို ဘယ်အမျိုးသမီးကသည်းခံပေါင်းမှာလည်း အမပြောသလို နိုင်ငံရေးတွေပါလာမှာဆိုးလို့ဆက်မပြောတော့ဘူး..”
အေးတခုတော့မှတ်ထား ဟန်ငြိမ်းဦးခေါင်းပေါ်မှာ အနီလည်းမရှိဘူး အစိမ်းလည်းမရှိဘူး။ အမှန်တရားပဲ ရှိတယ် ရှင်းလား…? “ဆိုပြီး ပြန်လည် ချေပထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အခုလိုအဆုံးထိဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Page မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
နောက်များမှာလည်း အခုလိုဆယ်လီတို့ရဲ့ သတင်းများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Page လေးကို Like &amp; See First လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအုံးနော်။
ဘယျသူမှ မသိသေးတဲ့ မငျးသားကွီး ကြျောရဲအောငျနဲ့ ပိုးဝတီစံရဲ့ အကွောငျး ပျေါထှကျလာပွီ
ဟနျငွိမျးဦးကတော့ မငျးသမီးလေး ပိုးဝတီစံနဲ့ မငျးသားကွီးကြျောရဲအောငျတို့ ဇာကျလမျးတှေ ဖှငျ့ခြ ထားပွီးနောကျ ပိုးဝတီစံ ရဲ့ တုနျ့ပွနျမှုတှကေို ယခုလို ပွနျလညျ ခပြေထားပါတယျနျော။ “ဟုတျတာပေါ့ ဟနျငွိမျးဦးဆိုတဲ့ကောငျလေးက အနီထောကျခံသူတှကေိုပဲတငျတာ.ဖိုးလပွညျ့၊အေးနဝေငျး၊အေးမွတျသူ၊ မိုးစကျဝိုငျ၊မိုးယံဇှနျတို့ NLDဘကျတျောသားတှေ ဘယျတုနျးကဖွဈသှားတာလညျးဟငျ ရှငျးပွအုံး ”
နောကျတခုကြျောရဲအောငျ သူ့အမြိုးသမီးနဲ့2003မှာ ကှဲသှားတယျဆိုပီး အမဝနျခံတယျနျော။ ဘာလို့ကှဲသှားလညျးဆိုတာ အမသိလား သိအောငျရောကွိုးစားဘူးလား တလမှာ ၂၅ရကျလောကျက ဟိုတယျမှာဆျောနဲ့နပေီး ငါးရကျလောကျအိမျပွနျအိပျတဲ့ ယောကျြားတယောကျကို ဘယျအမြိုးသမီးကသညျးခံပေါငျးမှာလညျး အမပွောသလို နိုငျငံရေးတှပေါလာမှာဆိုးလို့ဆကျမပွောတော့ဘူး..”
အေးတခုတော့မှတျထား ဟနျငွိမျးဦးခေါငျးပျေါမှာ အနီလညျးမရှိဘူး အစိမျးလညျးမရှိဘူး။ အမှနျတရားပဲ ရှိတယျ ရှငျးလား…? “ဆိုပွီး ပွနျလညျ ခပြေထားတာတှရေ့ပါတယျ။ အခုလိုအဆုံးထိဖတျရှုပေးတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ Page မှ အထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော။
နောကျမြားမှာလညျး အခုလိုဆယျလီတို့ရဲ့ သတငျးမြားနှငျ့ ပွညျတှငျးပွညျပသတငျးမြားကို အခြိနျနှငျ့တပွေးညီတငျဆကျပေးမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျကြှနျတျောတို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပျပေးသှားကွပါအုံးနျော။
Previous: လေးစားဖှယျကောငျးတဲ့ ဟိနျဒူဘာသာဝငျ ဝပျရှော့ဆရာမလေး
Next: ကောက်ရိုးခြောက်ဖြင့် ဆီးချို အမြစ်ပြတ်ကုတဲ့ နည်းလမ်း